Abakhiqizi be-SMB Wi-Fi & abahlinzeki - i-China SMB Wi-Fi Factory
I-DCN EAP380-E iyindawo yokungena engenazintambo (i-AP) eyenzelwe imakethe ye-SMB. Inikeza ngamakhono wokusekelwa okuphelele kwezinsizakalo futhi inokwethenjelwa okuphezulu, ukuphepha okuphezulu, ukuthunyelwa kwenethiwekhi okulula, ukutholakala nokulungiswa kwe-AC okuzenzakalelayo, kanye nokuphathwa kwesikhathi sangempela nokugcinwa, okuhlangabezana nezidingo zokuthunyelwa kwenethiwekhi okulula. I-AP ihambisana nokuhambisana kwamazinga we-802.11ac wave 2 futhi inganikela ngokudlula okuphezulu kwe-1.167Gbps - 300Mbps ku-2.4G nge-2 × 2, 867Mbps ku-5G nge-2 × 2. I ...
I-EAP280-E ibhizinisi elisha elingabizi kakhulu i-Wi-Fi AP (i-Access Point) elethwe yiDCN. Le AP isekela indinganiso engu-802.11n ngokuxhuma okuphezulu kwe-Mega Ethernet. I-EAP280-E isebenza ngebhendi ye-2.4G futhi amandla amakhulu angafika ku-300Mbps. I-EAP280-E ihlinzeka ngokusebenza okuhlukahlukene kwemisakazo, iselula, ezokuphepha nobunjiniyela bethrafikhi njll. ...
I-EAP220 Smart 802.11ac Dual Band In-wall Wireless AP
I-EAP220 ingafakwa kuphaneli ejwayelekile ye-x86, ngaphandle kokwakhiwa kabusha kodonga ukonga izindleko nesikhathi, nokuvikela umhlobiso wokuqala. I-EAP220 isekela ibhendi engu-802.11AC ejwayelekile2.4G ne-5G, futhi isekela umkhawulokudonsa ongenantambo ophakeme kakhulu we-733Mbps. I-EAP220 inikeza i-100M uplink Ethernet port eyodwa, itheku elilodwa le-downlink 100M Ethernet netheku elilodwa locingo i-RJ11. Itheku le-uplink lingasekela i-802.3af POE, ngakho-ke i-EAP220 ayigcinanga ngokuhlinzeka ngokusebenza okuphezulu kwe-WIFI, kepha futhi ingahlinzeka ...
I-EAP180 Smart 802.11n Single Band In-wall Wireless AP
I-EAP180 ingafakwa kuphaneli ejwayelekile ye-x86, ngaphandle kokwakhiwa kabusha kodonga ukonga isikhathi nezindleko. I-EAP180 isekela izinga elingu-802.11n futhi isebenza ngebhendi engu-2.4G, inganikeza nge-bandwidth engu-300M. I-EAP180 ihlinzeka nge-1 * 100M uplink Ethernet port, eyodwa downlink 100M Ethernet port kanye ne-RJ11 port port eyodwa. Ngechweba le-uplink elisekela i-802.3af POE, i-EAP180 ayigcini ngokunikela ngokusebenza okuphezulu kwe-WiFi, kepha futhi nokuxhumeka okwengeziwe kwentambo nokuxhumeka kocingo. Izici ezibalulekile nokugqamisa kulula ...
Isilawuli se-EAC680 SMB Smart Wireless Access
I-DCN EAC680 iyi-smart access controller (AC) eyenzelwe amanethiwekhi angenantambo we-SMB namagatsha amakhulu ebhizinisi. Ingakwazi ukuhlangana ne-DCN smart EAP series wireless access points (APs) ukwakha isixazululo esiphethwe maphakathi nesilawulwa yi-wireless LAN (WLAN). I-EAC680 isekela ama-24 * 10/100 / 1000MBase-T no-4 * 10GbE SFP +) we-uplink, ingaphatha ama-APS angama-wireless angama-520. Idivayisi inikezela ngokulawulwa okuqinile kwe-WLAN ngokusebenzisa amasistimu afana nokulawulwa nokuphathwa kwabasebenzisi okunembile, ukuphathwa okuphelele kwe-RF kanye ne-securi ...
Isilawuli sokufinyelela se-EAC660 SMB Smart Wireless
I-EAC660 iyi-smart access controller (AC) eyenziwe yiYunke China Information Technology Limited (kamuva ezobizwa ngeDCN) yamanethiwekhi angenantambo we-SMB namagatsha amakhulu ebhizinisi. Ingakwazi ukuhlangana ne-DCN smart EAP series wireless access points (APs) ukwakha isixazululo esiphethwe maphakathi nesilawulwa yi-wireless LAN (WLAN). I-EAC660 isekela ama-4 * GbE Combo (SFP / RJ45), amachweba ayi-12 * 1000M SFP namachweba ama-4 * 10GbE SFP + e-uplink. Ingaphatha afinyelela kuma-260 ama-smart wireless APs. Idivayisi inikeza i-WLAN eqinile i-acce ...
I-EAP380-L ibhizinisi elisha elingabizi kakhulu i-Wi-Fi AP (i-Access Point) elethwe yiDCN. Le AP isekela zombili i-802.11ac ne-802.11n ejwayelekile ngokuxhuma okuphezulu kwe-Mega Ethernet. Isilinganiselo esiphezulu sokuhlanganiswa okuhlanganisiwe singafika kuma-733Mbps. Umsakazo we-2.4GHz usekela i-802.11n standard ngokufika ku-300Mbps throughput; umsakazo we-5GHz usekela okujwayelekile kwe-802.11ac ngokufika kokufika ku-433Mbps. I-EAP380-L ihlinzeka ngokusebenza okuhlukahlukene kwemisakazo, iselula, ezokuphepha kanye nobunjiniyela bethrafikhi njll.